सुन तस्करी अनुसन्धान घेरामै थिए कोलकातामा पक्राउ परेका राकेश र हेम - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
सुन तस्करी अनुसन्धान घेरामै थिए कोलकातामा पक्राउ परेका राकेश र हेम
भारत, पश्चिम बंगालको धनकुनीमा ३३ केजी सुनसहित पक्राउ परेका दुई नेपाली गृह मन्त्रालयको सुन अनुसन्धान टोलीको अनुसन्धान घेराभित्रका व्यक्ति भएको खुलेको छ।
सरकारले २०७४ चैत २० मा सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजक्तवमा गठन गरेको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा बतन नखुलेका राकेश प्रसाद र हेमकुमार वा हेमप्रसाद उल्लेख छ। टोलीले बुझाएको ७ सय ५२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा २९२ जना ब्यक्तिहरुसँग थप बुझ्नुपर्ने भनेको थियो। त्यसमा मंसिर २१ मा भारतमा पक्राउ परेका राकेशप्रसाद र हेमकुमार शर्माको नाम समेत छ।
तत्कालीन अनुसन्धान टोलीका संयोजक पौडेलले कोलकतामा बरामद सुन इमिरेटस गोल्ड भएको र पक्राउ ब्यक्ति अनुसन्धान सञ्जालभित्रकै भएकाले बरामद सुन नेपालबाट हराएको सुन हुनसक्ने उल्लेख गरेका छन्। थप अनुसन्धानका लागि नेपाली टोली भारत पठाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
‘हामीले बरामद सुन र पक्राउ ब्यक्तिका विषयमा बुझ्ने काम गर्याैं। पक्राउ व्यक्तिहरु प्रतिवेदनमै उल्लेख भएका नाम हुन्। थप अनुसन्धानका लागि टोली पठाउने तयारीमा छौं,’ सहसचिव पौडेलले नेपालखबरसँग भने।
मंसिर २० र २१ मा भारतीय अधिकारीको कारवाहीमा ६६ किलो सुन बरामद भएको थियो। भारतीय राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुले मंसिर २० मा लखनउ क्षेत्रबाट ३३ किलो सुन बरामद गरेका थिए। उनीहरुका अनुसार पक्राउ परेका ब्यक्तिको बयानका आधारमा पश्चिम बंगालको धनकुनीबाट थप ३३ किलो सुन मंसिर २१ मा बरामद भएको हो। यही घटनामा दुई नेपाली समेत पक्राउ परेका छन्।
भारतीय अधिकारीहरुले लखनउ र पश्चिम बंगालमा बरामद गरेको सुन दिल्ली जाँदै थियो। लखनउमा पक्राउ परेका ब्यक्ति सुन तस्करीका माफिया भएको भारतीय अधिकारीहरुले बताएका छन्। ती व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन। भारतमा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहने रेभ्न्यु इन्टिलिजेन्स ब्युरोको लखनउ क्षेत्र र कोलकाता क्षेत्रको कारवाहीपछि भित्रिएको सुन र पक्राउ परेका आरोपीका बिषयमा अनुसन्धान सुरु भएको हो।
कोलकाता क्षेत्रका राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रमुख नायब महानिर्देशक दिपांकर अरुणले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको बताए। नेपालखबरसँग टेलिफोन कुराकानी गर्दै उनले नेपालस्थित भारतीय दूतावासलाई सबै जानकारी गराइएको जानकारी दिए।
‘अनुसन्धान भइरहेको छ। धेरै जानकारी काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास पठाएका छौं’, उनले भने, ‘सुन तस्करी प्रकरणबारे कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई पनि जानकारी गराइएको छ।
काठमाडाैंस्थित भारतीय दूतावासले घटनाकाे प्रारम्भिक जानकारी पाए पनि विस्तृत अनुसन्धान निष्कर्ष अाइ नसकेकाे उल्लेख गरेकाे छ।
भारतीय पक्षले पत्राचार गरेपछि नेपाली अधिकारीहरु समेत अनुसन्धानमा जुटेका छन्। कोलकाताका महाबाणिज्य दूत एकनारायण अर्यालका अनुसार भारतीय पक्षले आधिकारिक पत्र पठाएर ३३ केजी सुनसहित नेपाली पक्राउ परेको जानकारी गराएको छ। पत्र पाएसँगै वाणिज्य दूतावासले पनि सोधखोजी थालेको छ। ‘भारतीय पक्षबाट पत्र पाएपछि यो विषयमा हामीले सोमबारदेखि थप बुझ्ने काम गरिरहेका छौं। घटनाको जानकारी केन्द्रमा गराइसकेका छौं’, अर्यालले नेपालखबरसँग टेलिफोनमा भने।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर २०७४ माघको पहिलो साता भित्रिएको साढे ३३ किलो सुन हराइरहेको हो। नेपाली अधिकारीहरुले भारतमा बरामद भएको सुन नेपालबाट हराएको हुनसक्ने भन्दै अनुसन्धान थालेका हुन्।
के हो ३३ केजी सुनको कथा?
२०७४ माघ महिनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थाई एयरवेजबाट साढे ३३ किलो सुनको पोको आएको थियो। थाई एरयवेजबाट आएको अवैध सुन टेकराज मल्ल र रोहित आचार्यले तस्करी गरी ल्याएका थिए। मल्ल र आर्चायले सुन थाई एयरवेजका सिनियर टेक्निसियन सानु बनको जिम्मा लगाएका थिए।
त्यही दिन बनले सुन विमानस्थलबाट बाहिर ल्याएर घर पुगेका थिए। बनको घरबाट उनीसँगै तक्ले भन्ने पूण्यप्रसाद लामा समेत सुन पुर्याउन अनामनगरसम्म फरक–फरक मोटरसाईकलमा गएका थिए।
सुन बोकेर बन चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ समूहको अड्डा अनामनगर गए। उनले प्रयोग गर्ने एनसेलको ९८०५३६३४८६ नम्बरको मोबाईलको लोकेशन पक्राउ परेकाहरुको बयानमा भने अनुसार नै देखिएको छ। बन अनामनगर भएकै समयमा भुजुङ गुरुङका चालक फाल्दुङ गुरुङ त्यही लोकेशनमा थिए।
गोरेको अनामनगर अड्डामा दुईवटा मोटरसाईकलमा रहेका चारजना हेल्मेटधारी अज्ञात व्यक्ति देखेपछि बन अड्डामा नपसी अगाडि बढ्छन्। लामा पनि बनको पछिपछि लाग्छन्।
लामाले अनुसन्धान समितिमा दिएको बयानमा मोटरसाईकल र ३–४ जना मानिसहरू भेला भएको देखेपछि बन अगाडि–अगाडि र आफू पछि–पछि मोटरसाईकल चलाई सटर क्रस गरेर अगाडि गएको उल्लेख गरेका छन्।
‘बन सरले मोटरसाइकल रोकेपछि म निजलाई क्रस गरेर १०–१५ मिटर अगाडि गई मोटरसाईकल रोकी मैले निजको मोबाइल नम्बर ९८४१५२२३१५ मा मेरो मोबाइल नम्बर ९८४९९९९११८ बाट फोन गरी किन के भयो? किन मोटरसाईकल रोक्नु भएको? भनी सोध्दा यहाँ खतरा छ जस्तो छ। तिमी यहाँबाट गइहाल भनेपछि म मोटरसाईकलमा चलाई झन्डै ५ सय मिटरजति अगाडि एउटा चोकमा पुगें’, उनले भनेका छन्।
‘त्यही समयमा भित्रको गल्लीबाट एउटा स्कुटीमा बन सर पछाडि बसेर आएको र गल्लीमा पसेपछि नभेटेको र फोन पनि लागेनँ,’ उनले भनेका छन् ‘तर पछि बन आफैँले फोन गरेर लामालाई विमानस्थल कार्यालयमा छिर्न भनेको थिएँ।’
सोही दिन बनले सुन लुटिएको बताएपछि भारतमा रहेका गोरेको निर्देशनमा सुन खोजी तीब्र पारिएको थियो। खोजीमा टेकराज मल्ल, भविन राई लगायतका गोरे समूहका व्यक्ति सक्रिय थिए। सुन गायब भएको ९ माघदेखि २१ माघसम्म काठमाडौं, मोरङ, नुवाकोट र सिन्धुलीसम्म गोरेको समूहले यातना दिएर सुन खोजी गरेको थियो। गोरे समूहको यातनाबाट मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्यको मृत्यु भएको थियो।
प्रकाशित १ पुस २०७५, आइतबार | 2018-12-16 18:49:32